ny tvOS 11.2.5 sy ny watchOS 4.2.2 dia azo alaina ihany koa Avy amin'ny mac aho
tvOS 11.2.5 sy watchOS 4.2.2 azo alaina ihany koa
Araka ny lazainay anio tolakandro dia namoaka ny kinova rindrambaiko rehetra misy an'ity i Apple tvOS 11.2.5 sy watchOS 4.2.2, izy ireo koa dia vonona ny hisintona. Herinandro izay manomboka amin'ny hafanam-po ho an'i Apple ary rehefa avy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny daty fanombohana ny famandrihana ho an'ny HomePod isika dia mahita ny kinova farany an'ny rindrambaiko rehetra.
Amin'ity tranga ity, ny fanatsarana nampiana tao amin'ny tvOS 11.2.5 sy watchOS 4.2.2 dia mifandray mivantana amin'ny fanatsarana ny fitoniana sy ny fiarovana ny rafitra, nefa azo antoka koa fa manampy fampifanarahana amin'ny fiasa vaovao napetraka ao amin'ny mpanampy Siri ary fanatsarana kely hafa izay tsy faritan'i Apple fa misy ao amin'ireo kinova vaovao.
Ny fiakaran'ny kinova beta dia nitombo nandritra ny herinandro lasa teo ary ny zoma dia hitanay ny fahatongavan'ny kinova beta farany ho an'ny mpamorona, anio talata, efa manana ny kinova farany misy izahay. Aza adino fa amin'ny tranga Apple Watch dia ilaina izany manana 50% ny bateria voampanga ary atoro anao ny famoahana famantaranandro mba hisorohana olana. Raha iray amin'ireo mpampiasa manana maodely Series 0 na ny voalohany ianao, ny faharetana dia zavatra iray tsy azonao resena rehefa manavao ilay famantaranandro.
Ny kinova vaovao navoakan'i Apple anio tolakandro dia zava-dehibe na dia toa tsy manampy fanovana aza izy ireo ary mazava ho azy Manoro hevitra izahay ny hametraka azy ireo mba hampiharana ny fanatsarana. Mety tato anatin'ny volana vitsivitsy izay ity fitenenana ity "ny fanatsarana izay ampian'i Apple" dia tsy ny adihevitra tsara indrindra, fa zava-dehibe ny fananana kinova farany indrindra hisorohana ny olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » tvOS 11.2.5 sy watchOS 4.2.2 azo alaina ihany koa
Toy izany no fiasan'ny Press and Hold amin'ny macOS
Seagate Fast SSD, kapila ivelany izay hiaraka amin'ny MacBook anao amin'izay tianao